पत्रपत्रिका Archives - पब्लिक पाेष्ट
August 5, 2019 EP EDITORLeaveaComment on सेटिङमा नयाँ बसपार्क कब्जा : १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका र गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क सञ्चालक ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडबीच १६० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने गरी गैरकानुनी ‘पूरक सम्झौता’ भएको फेला परेको छ। ल्होत्सेले मूल सम्झौताविपरीत नयाँ बसपार्कमा गैरकानुनी रूपमा बनाएको व्यापारिक संरचनालाई वैधता दिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तत्कालीन पदाधिकारीको सहारा लिएको थियो। आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी र ल्होत्सेका सञ्चालकको मिलेमतोमा आयोगले […]
विप्लव समूह छाडेर नेकपामा प्रवेश गर्ने लहर
August 5, 2019 EP EDITORLeaveaComment on विप्लव समूह छाडेर नेकपामा प्रवेश गर्ने लहर
काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको जेठ १९ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव समूह)का पोलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वराज्यमन्त्री पदम राईलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै भन्नुभयो, “ढिलो चाँडो विप्लव पनि यसैमा (नेकपामा) प्रवेश गर्नुपर्छ । अरू विकल्प छैन । ’’ उहाँले थप्नुभयो, “म अन्य साथीहरूलाई कुनै पूर्वाग्रहबिना मूल राजनीतिक पार्टीमा समाहित हुन आग्रह […]
August 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on आमाकै संलग्तामा बलात्कृत भएकी बालिका विस्थापित
धनुषा । महोत्तरी भंगहा नगरपालिकाकी १२ वर्षीया बालिकालाई ‘धम्क्याउँदै’ भारत पु¥याएर १५ दिनसम्म लगातार बलात्कार गरिएको गत महिना पीडित बालिकाले नै खुलासा गरिन्। आमाकै संरक्षणमा बालिकालाई भारतको दिल्ली पु¥याएर १५ दिनसम्म निर्घात कुटपिट गरी बलात्कार गरिएको थियो। पटक–पटक बलात्कृत हुनबाट जोगिन र ज्यान जोगाउन बालिकाले इन्टरनेटको माध्यमले दिल्लीबाट नेपालमा रहेकी आफ्नी ठूलीआमालाई घटनाबारे जानकारी गराइन्। […]
काठमाडौ । कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक भएर बिएमा भर्ना लिने समय आइसक्यो, तर अधिकांश विषयका कोर्स नै तयार छैनन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको सबै विषयको कोर्सलाई यसै वर्षदेखि चारवर्षे बनाउने तयारी गरेको छ । त्रिवि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका डिन प्रा. शिवलाल भुसालले यसै शैक्षिक सत्रबाट बिए चारवर्षे हुने बताए । तर, डिन कार्यालयले चारवर्षेे […]
August 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on लोप हुने हो कि मितेरी साइनो ! कसरी बन्छ त मित ?
काठमाडौँ, साउन १९ गते । ललितपुर लुभूका सजना श्रेष्ठ आफू सात वर्षको हुँदा हजुरआमाले मित लगाइदिएको सम्झनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “धेरै सम्झना त छैन तर मितिनीसँग खेल्न र हाँस्न पाउँदा निकै रमाइलो लाग्थ्यो । ” उहाँको मितिनीको नाम प्रमिला थापा हो । श्रेष्ठले थप्नुभयो, “हाम्रो घरमा दूध पु¥याउन आउने आमाको पनि एक जना छोरी र […]
कञ्चनपुर । वारि उल्टाखाम जाने कालोपत्रे सडक। सडककै किनारमा पानी बगिरहने दुई फिट गहिरो नाला। नालाको दुवै किनारमा बाक्ला जामुनका बोट। पारिपट्टि गुज्जमुज्ज उखुबारी। उखुबारीको करिब एक किलोमिटर वरपर सुनसान खेतबारी। हो, त्यही उखुबारीमा अघिल्लो साउन ११ गते बिहान उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको शव भेटिएको थियो। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा उखुबारीको घारीभित्र शव […]
August 3, 2019 August 4, 2019 EP EDITORLeaveaComment on यसरी तातिँदै छ पृथ्वी, काठमाडौंको अवस्था के ?
बीबीसी । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तामक्रम बढ्दै गएको छ। सन् २०१९ को जुलाई अहिलेसम्मकै तातो महिना साबित भएको छ। वैज्ञानिकहरूले विश्वको तापमान औसत १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन चेतावनी दिएका छन्। तीव्र औद्योगिकीकरणका कारण सन् १८५० देखि १९०० को अवधि अत्यधिक तातेको थियो।त्यसयता १ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढिसकेको छ। यसलाई वैज्ञानिकले अत्यन्त जोखिमपूर्ण मानेका […]
उदयपुर । जिल्ला अदालतको त्रुटीपूर्ण फैसलाले आफु अन्यायमा परेको भन्दै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–११ चप्पनकी देवीमाया कटुवाल निर्णय बदरको माग गर्दै ३ वर्षदेखि उच्च अदालत ओखलढुंगा धाइन् । सरकारवादी यस मुद्दामा उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर ग¥यो । देवीमायासँग अदालतको फैसला स्वीकार्नुको विकल्प थिएन । अझै अदालत धाउँदाको खर्च र पीडा थेगी नसक्नु भयो । अदालत […]
काठमाडौँ । धादिङका उर लामा मजदुरी गरेर मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । पाँचजना परिवारको खर्च उनैले जुटाउँछन् । मैतीदेवीमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएका उनी सरकारले ल्याएको ‘एक व्यक्ति एक प्यान नम्बर’ नीतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् । ‘सरकारको यो नीतिले हामी मजदुरी गर्नेलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भने, ‘मजदुरीको कामबाट दिनको ६ सय रुपैयाँ मात्र कमाइ हुन्छ । काम पाउँदा […]
August 2, 2019 EP EDITORLeaveaComment on उपत्यकाबाट मात्रै एक वर्षमा साढे १८ करोडको सुन बरामद
काठमाडौ । प्रहरीले उपत्यका भित्रिने मुख्य नाका नागढुंगाबाट एक किलो सुनसहित तस्करीमा संलग्न एक अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ । रसुवा गोसाईकुण्ड–५ का ३२ वर्षीय दिन्डुप तामाङ पक्राउ परेका हुन् । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटबाट खटिएको प्रहरीले नाकामा नियमति जाँच गर्ने क्रममा उनी पक्राउ परे । बा.९ प २७२६ नं. को २०० सिसीको पल्सर मोटरसाइकलमा सवार उनले सुनलाई चार […]